Waa Maxay Ibidda Cunnuga? |
Miski Cabdinuur Salal — February 22, 2019
Ibidda waa xubin ku meel gaar ah, waxa ay ku dhagantahay darbiga ilma galeenka, badana waxa ay ku dhagan tahay qaybta sare ilma galeenka, mararka qaar ayey ku dhagtaa afka ilma galeenka kaasoo keeni karto inuu halis galo nolosha cunnuga, waxa ay sameysmataa billowga cunnuga marka uu calool galo, waxa ayna dhammaataa dhalashada cunnuga marka uu bannanka oga soo baxo ilma galeenka hooyada.
Haddaba Kaallay Aan Isla Fiirinee waxa ay U Qabataa Cunnuga An Wali Dhalan:
Ibidda waxa ay isku xirtaa cunnuga iyo xariga ka dhaxeeyo hooyada iyo cunnugeeda waxaa loo yaqaanaa xariga xudunta cunnuga (umbilical cord) ,isku xirkaas waxa uu ka dhacaa ilma galeenka hooyada .
Ibidda waxa ay cunnuga ka caawisaa qashinka in uu iska saaro, siddo kale waxa ay u qabataa cunnuga in uu qaato oksijiin(oxygen) iyo in uu soo daayo karboondhaay oksaaydh (carbondioxide) taasina waxaa loo yaqaanaa : Isbadalka hawada (gas exchange ) ayadoo loo maraayo qulqulka dhiigga hooyada.
Ibidda cunnuga waxa ay u tahay difaac ka difaaca ifekshan gudaha , ibidda waxay soo deeysaa hormoono taas oo ay ku caawinayso uurka.
Maxaa saameeyo caafimaadka ibidda?
A- Da’da hooyada waxaa jiro dhibaatoyin ku dhaca ibidda oo caan ku ah marka ay hooyada da’ahaan ka wayn tahay 40 sano .
E- Sare u kaca caadiska cabirka dhiigga hooyada .
I- Uurka mataanaha waxa uu saameeyaa caafimaadka ibidda.
O- Qalliindii hore oo lagu saameeyey ilma galeenka , waxa ay saameeyaan caafimaadka ibidda.
U- Dhibaatoyin Hore ee ku dhaca ibidda waxa ay saameeyn karaan caafimaadka ilmaha danbe ibiddooda
Siddee Ayaan Ku Yareen Karnaa Dhibaatoyinka Ibidda?
B- In ay Hooyada ka fagaato cabista sigaarka ,
T- Hooyada In joojiso isticmaalka daawada dhaqtar aanan qorin.
J- Hooyada in ay si joogta ah u tagtaa goobaha caafimaadka.
X- Hooyada caadiska dhiiggeda kacsanyahay in la maareeyo caafimeedkeeda.
Tags: Waa Maxay Ibidda Cunnuga?
Next post Matahay Qof Jecel Wax Aqrinta?
Previous post 6-qodob oo Saameyn Kugu Yeelan Doonto Haddii aad Aqrido!